FAQ - Ikhtiyaarada Dugsiga Hoose - Axdiga Barashada Shirarka
Fursadaha Dugsiga Hoose FAQ
Ikhtiyaariyada Dugsiga Hoose ee Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo
S: Immisa jir ayaa ardaygu noqonayaa inuu bilaabo barnaamijka SLC?
A: Ardaygu waa inuu jirsadaa 5 sano jir ama ka hor bisha Sebtember 1 ee sanadka ay doonayaan inay bilaabaan dugsiga.
S: Waa maxay akadeemiyada dalwaddu sidee bay u shaqaysaa?
A: Akademiyada casriga ahi waxay adeegsaneysaa manhajka ku saleysan kombiyuuterka iyo goobo kulan oo casri ah si loogu taageero waxbarashada ku saleysan masaafada. Barnaamijkeenu wuxuu ku darayaa agabyada qoraalka ah ee loo yaqaan "homeeschool qoraalka" ee ardayda barta fasallada k-5, kobcinta iyo baritaanka goobta, iyo nashaadaadyada bulsheed si kor loogu qaado khibrad waxbarasho oo buuxda.
S: Waa maxay doorka waalidku ee fasalada K-5?
A: Waaliddiinta waxaa laga filayaa inay noqdaan Tababbarka Waxbarida ee arday kasta. Tababbarka waxbarashadu waa waxbaraha aasaasiga ee ardayga. Macallimiinteena aqoonta sare leh ayaa diyaar u ah in ay ka caawiyaan waalidiinta taageerada ayagoo siinaya istiraatiijiyad waxbarid iyo ilo adiga marka loo baahdo.
S: Waa imisa qiimaha Barnaamijka Fursadaha Dugsiga Hoose?
A: SLC waa iskuulada dadweynaha ee lacag-la'aana ee bilaashka ah oo ay maalgaliso Waaxda Waxbarashada Oregon. Qiimaha kaliya ee uu qoysku ku kaco waa kharashaadka lagu bixinayo isku xirka khadka internetka iyo khidmada safarka.
S: SLC ma bixisaa safaro hawleed?
A: Haa! Safarrada dibedda lagu bixiyaa ma aha oo keliya qayb waxbarashadeed laakiin sidoo kale waa qayb bulsheed sidoo kale. SLC waxay bixisaa dhowr safar oo sanadkii ah.
S: Waa maxay Qiimaynta STAR 360?
A: Qiimeyntan waxaa la siiyaa ardayda K-5 marka ay is qorayaan (sida caadiga ah Deyrta), ka dib markale xilliga qaboobaha iyo guga. Qiimayntu waxay la socotaa horumarka ardayga ee Xisaabta iyo Akhrinta waxayna gacan ka geysaneysaa sidii loo ogaan lahaa meesha ardayga awoodooda iyo daciifnimadooda ay jiraan. Waxaan siinaa tababbaraha warbixin faahfaahsan iyo liis fikradaha tilmaamaha ah oo lagu dhisayo meelaha liita, sidoo kale waxaan ku taageerna meelaha ka sii xoog badan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u isticmaalnaa xogtan si aan u qorsheyno manhajka oo aan u falanqeyno baahiyaha barnaamijka.
S: Waa maxay "kobcin"?
A: Kobcinta waa casharo waji ka waji ah iyo nashaadyo aan usameynno usbuuc walba sanadka oo dhan si “aan u kobcino” ardaydaada khibradda barashada. Fasalku waxaa ka mid noqon kara tilmaam diiradda saara xisaabta, Arts Arts, Qorista, Science-ka, ama cilmiga bulshada. Waxaan had iyo jeer kuu soo bandhigi doonnaa PE, Music, iyo Orchestra, waxaana ku dari karnaa waxqabadyo sida fanka ama riwaayadaha. Kobcintaani waxay siisaa ardayda fursado ay si wada jir ah ula shaqeeyaan ardayda kale ee heerarka da'da ah.
S: Miyaa la iska qori karaa SLC iyo iskuul kale / barnaamij isla waqti isku mid ah?
A: Maya Markay ardaydu iska diiwaangeliyaan SLC, ardaydu waxay noqdaan arday wakhti buuxa ah oo ka tirsan SLC.
S: Miyay tahay inaan ku noolaado Dugsiga Degmadda Estacada si aan isaga diiwaangaliyo SLC?
J: Maya. Dhammaan jaartarka gobolka Oregon waa inay kafaalo qaadaan degmo dugsiyeed. Dugsiga degmada Estacada ayaa kafaala qaadeysa SLC. Waqtigaan, ardayda adeegyada SLC ee deggan 30 in ka badan.
S: Dhammaan macallimiinta SLC ma yihiin kuwo aqoon sare leh?
S: Ardayda SLC ma looga baahan yahay inay kaqaybqaataan imtixaanka gobolka?
A: Haa. Dhamaan ardayda isku qorta iskuullada dadweynaha waxaa laga filayaa inay kaqaybqaataan imtixaanka gobolka fasalada 3-8, iyo 11.
S: SLC ma aqoonsan tahay?
A: Haa. SLC waxaa aqoonsi ka haysta shirkadda 'AdvancED'; wakaaladda aqoonta deegaanka.